suja – Annapurna Post News
May 20, 2022 sujaLeaveaComment on बलात्कारीलाई एक वर्षभित्र अभियोग लगाउनुपर्ने समय सीमा किन ?- आरजु राणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले नेपालमा बलात्कारसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न संसद्समक्ष अनुरोध गरेकी छन् । बलात्कार सहेर बाँचेकाहरुलाई आफ्नो पीडाबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्न समय लाग्छ र न्यायको लडाइँ सुरु गर्ने साहस जुटाउन पनि उनीहरुलाई धेरै वर्ष लाग्न पनि सक्छ भन्दै उनले हाल विद्यमान रहेको वर्षदिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने लगायतका कानुनी […]
May 20, 2022 sujaLeaveaComment on शिक्षक कर्मचारीको पोशाक परिवर्तन, यस्तो छ ड्रेस कोड
काठमाडौ । शिक्षक कर्मचारीको पोशाक परिवर्तन भएको छ । नयाँ पोशाक लागू गर्न सम्बन्धित सबैलाई परिपत्र जारी गरिएको छ । शिक्षकहरूले सामाजिक सञ्जालमा गरेको भोटिङका आधारमा शिक्षकको ड्रेस छनोट गरिएको हो । नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्नो फेसबुक पेजमा विभिन्न रङ्ग भएका १० प्रकारका ड्रेस भोटिङका लागि राखेको थियो । शिक्षकहरूले आफूलाई मन पर्ने ड्रेसमा भोट […]
गुल्मी । उनी पोखरेल थरकी (जैसी क्षेत्री) ब्राह्मणकी छोरी हुन्, जो यसपालीको स्थानीय तह निर्वाचनमा गुल्मीको एक वडाबाट ‘दलित महिला सदस्य’मा निर्वाचित भएकी छन् । झट्ट सुन्दा जैसी ब्राह्मणकी छोरी दलित महिला सदस्यमा कसरी निर्वाचित भइन् भन्ने प्रश्न उब्जिएला । तर उनले दलित महिला सदस्य हुने अधिकार प्राप्त गरेकी छन् ।किनकि उनले दलित समुदायका युवासँग […]
May 20, 2022 sujaLeaveaComment on ब्युटी पेजेन्ट बलात्कार घटना: प्रहरी युवतीको घर पुग्यो
काठमाडौं । सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले सात वर्षअघि नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको सार्वजनिक गरेकी युवतीको घरमा प्रहरी पुगेको छ । हदम्यादका कारण पीडकमाथि कारबाही नहुने भन्ने सुनेपछि उनले विक्षिप्त अवस्थामा अर्को भिडियो सार्वजनिक गरेकी थिइन् । शुक्रबार प्रहरी टोली उनको घरसम्म पुगेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा हुने जघन्य प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान गर्ने उपत्यका अपराध अनुसन्धान […]
May 20, 2022 sujaLeaveaComment on अमेरिकी राष्ट्रपतिको भन्दा धेरै धनी छन् उपराष्ट्रपति कमला, यस्तो छ कमाईको काइदा
काठमाडौं । अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले बैंक ब्यालेन्स (रकम) को मामिलामा राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पछि पारेकी छिन् । बाइडेनको दुई बैंक खातामा करिब ११ करोड रुपैयाँ छ ।जबकि ह्यारिसको व्यक्तिगत बैंक खातामा झण्डै १९ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । उनको पति डग एमहोफसँग पनि खाता छ, जसमा ६ करोड भन्दा धेरै रुपैयाँ छ । राष्ट्रपति […]
May 20, 2022 sujaLeaveaComment on ‘ब्युटी पेजेन्ट बलात्कार’ घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । आठ वर्षअघि आफू बलात्कृत भएको घटनालाई सार्वजनिक गरेकी एक युवतीका आरोपीलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्देशन दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले आठ वर्षअघि आफू बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरेकी युवतीका आरोपीलाई तत्काल कारबाही […]
May 20, 2022 sujaLeaveaComment on फ्याक्ट चेक : के बालेन साह दम्पतीलाई नै पुत्रीलाभ भएको हो ?
काठमाडौं । बिहिबार बिहानैदेखि अचानक बालेन्द्र साह (बालेन) लाई पुत्रीलाभ भएको खबर सार्वजनिक भयो । यसबारे बालेनकी श्रीमती सविना काफ्लेलाई पनि फोन आएको आयै छ । धेरैले छोरी जन्माएको भन्दै बधाई दिइरहेका छन् । अर्काथरी नजिकका आफन्तले छोरी पाएको हो र भनेर आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन् । छोरी जन्माएको खबर पढेर उहाँलाई हाँसो उठ्यो । […]
काठमाडौं । नेपालको चर्चित डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ स्टार्स नेपाल’ को दोस्रो सिजन चलिरहेको छ । शोको लोकप्रियता पनि निकै बढ्दैछ । मोडल सोनिका रोकाया र कोरियोग्राफर दिलीप ओखेडाको जोडीलाई दर्शकले मन पराएका हुन् । शुक्रबार साँझ ८ बजे हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आएको छ । सोनिका रोकायाको जोडीको नृत्यलाई दर्शक र निर्णायकहरुले मन पराएका […]
May 20, 2022 sujaLeaveaComment on चुनाव जिते भने बालेन यसकारण एमाले बन्छन्
काठमाडौ । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र (बालेन) साह को विजय हुने आँकलन गर्न थालिएको छ ।नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार केशब स्थापित र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार र्सिजना सिंह भन्दा बालेनको धेरै मतको अग्रता छ ।उहाँ विजयी भएपनि नेपालको कानूनी व्यवस्थाका कारण काम गर्न नसक्ने विभिन्न अड्कलबाजीहरु आइरहेका छन् । हुनपनि हो बालेनले यो चुनाव एक्लै […]
May 20, 2022 sujaLeaveaComment on अमेरिकामा भयो चमत्कार : आमाको कोखबाट नै दुई पटक जन्म
काठमाडौं । जन्मदेखि हाम्रो जीवन सुरु हुन्छ, सबैको जन्म एक पटक मात्र हुन्छ । तर अमेरिकामा एक रोचक घटना भएको छ । त्यहाँ आमाको कोखमा एक बच्चा दुई पटक जन्मेका हुन् । चिकित्सा विज्ञानको यो चमत्कार सुनेर मानिसहरु छक्क परेका हुन् । पहिलो जन्मपछि डाक्टरले बच्चालाई आमाको पेटमा नै राखेका थिए । ११ हप्तापछि अहिले […]